Ulahlwe ngelokudlwengula owakhipha ijazi kwenziwa ucansi | News24
Switzerland - Kube yicale elingajwalekile futhi ebelibhekwe ngabomvu lapho owesilisa, 47, ebekwe icala lokudlwengula ngemuva kokuvela ukuthi wakhipha ijazi lomkhwenyana ngaphandle kwemvume ngesikhathi enza ucansi nentombi.
Lo mlisa uthi wahlangana nalo wesimame enkundleni yezokuxhumana i-Tinder bazwana kangangokuba bavumelana ngokwenza ucansi.
Yize kungani inkantolo yaseLausanne ithi lo wesimame ubengeke avume ukwenza ucansi nalo wesilisa ukube ubazi ukuthi uzolikhipha ijazi lomkhwenyana bephakathi nenkonzo yasekamelweni.
OLUNYE UDABA: Ucwaningo: Isizathu esenza abantu besilisa bathenge ucansi kubaqwayizi
Ngokubika kwe-Blode.com, lo mlisa ugwetshwe izinyanga ezingu-12 ebhadla ejele kodwa zalengiswa, uma engeke atholakale enze isenzo esifanayo.
Icala elifana naleli lingelokuqala ezweni laseSwitzerland kanti abezinhlangano ezimele amalungelo abesimame bakuncome kakhulu ukuqulwa kwaleli cala nokubonisa ukuqiniswa kwemithetho evikela abesifazane.
Kwake kwavela imibiko ngaphambilini eveza ukuthi uyanda lo mkhuba wokuthi abantu besilisa bakhiphe amakhondomu kusasha inkonzo yasekamelweni ekubeni besuke bengavumelananga nalabo abazitika nabo ngokocansi.